Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekuisa Oxygen MuMvura Kune Hove Pasina Pombi - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekuisa Okisijeni MuMvura Kune Hove Pasina Pombi
Ndingawedzera sei oxygen mutangi rangu rehove pasina pombi?
Hove dzinogona kugara mumvura pasina pombi yemhepo here?
Iwe unowanzoita sei oksijeni mvura?
Ndinowana sei oxygen mutangi rangu rehove?
Inguva yakareba sei hove inogona kurarama isina oxygen pombi?
Matangi ehove anoda oxygen here?
Sefa inoisa oxygen mumvura here?
Iwe unochengeta sei hove pasina oxygen?
Matangi ehove anoda pombi dzemhepo here?
Ndinoziva sei kana hove dzangu dzichida oxygen yakawanda?
Hove dzinogona kurarama mumvura yemupombi here?
Anogona Guppy kurarama asina mweya pombi?
Ihove rudzii isingade tangi reokisijeni?
Hove dzinoda oxygen yakawanda sei?
Ndinoda pombi yeokisijeni kana ndine sefa?
Ko goldfish inoda pombi yemhepo here?
Hove dzinogara kwenguva yakareba sei dzisina sefa?
Imhando ipi yehove isingade sefa?
Hove dzinoda mafuro here?
Sei hove dzichigara pamusoro petangi?
Nzira dzeKuisa Oxygenate Hove Tangi Pasina Pombi Wedzera mhenyu zvidyarwa zve aquarium. Shandisa sefa yakasimba ine chiyero chinogadziriswa chekuyerera. Wedzera kubvongodza kwemvura. Wedzera nzvimbo yemvura. Chengetedza hove dzinoshambira mumazinga akasiyana etangi. Mvura inoshanduka/kapu nzira (yemamiriro ekukurumidzira).
Mapombi emhepo anomanikidza mweya weokisijeni kupinda mutangi rako nekuwedzera kusagadzikana kwepasi kuitira kuti hove dzako dzive neO2 yakawanda yekufema.
Oxygen inopinda mumvura kuburikidza nekuparadzirwa kubva kumhepo, mhepo uye mafungu chiito uye chirimwa photosynthesis. Yakanyungudika mazinga eokisijeni anowedzerwa nekuwedzera mhepo uye mafungu chiito, kuwedzera zvirimwa kumvura uye kufumura mvura kune yakanatswa oxygen.
Nzira yakanakisa yekuwedzera okisijeni ndeyekuwedzera nzvimbo ye aquarium. Wedzera Surface agitation kana kufamba kwemvura pamusoro. Izvi zvinobvumira okisijeni yakawanda kunyungudika uye yakawanda kabhoni dhaikisaidhi kutiza. Iwe unogona zvakare kuwedzera tsime reokisijeni nyowani nekuisa pombi yemhepo.
Goldfish uye hama dzavo dzomusango crucian carp dzinogona kurarama kwemwedzi mishanu pasina kufema okisijeni - uye ikozvino tinoziva sei. Hove dzakagadzira seti yema enzymes ayo, kana mwero weokisijeni uchidonha, pakupedzisira unobatsira kushandura makabhohaidhiretsi kuita doro iro rinobva raburitswa kuburikidza nemagill.
Yakakosha sei okisijeni muaquarium? Zviripachena, hove dzinoda okisijeni kufema, zvinomera zvinoda okisijeni usiku uye mabhakitiriya anobatsira anoda oksijeni kuputsa (okisijeni) tsvina. Chaizvoizvo zvese zvinofa kana kuora mu aquarium zvinoda uye nekudaro zvinopedza oxygen.
Mafirita anoenda kure kure akananga kukuwedzera okisijeni mumvura, sezvo anokonzera kufamba kwemvura pamusoro panowanikwa okisijeni. Mafirita anofanirwa kupinza mvura pazasi petangi, uye oiregedzera mu aquarium iri pamusoro, nokudaro achigovera mvura ine oxygen mukati.
Hunhu Hwemvura uye Kurapwa Rega kubata hove yako yegoridhe paunoshandura mvura kana kuchenesa ndiro. Chinja hove dzako kune imwe tangi yekubata. Bvisa tsvina kubva musubstrate nekufambisa zvishoma nezvishoma hurungudo. Ipa ndiro kuchenesa kwakanaka. Wedzera pretreated kamuri tembiricha mvura (zvishoma 50% exchange).
Pombi yemhepo inowedzera okisijeni inodiwa muaquarium kuti hove dzifeme uye inopawo oxygen kumabhakitiriya anobatsira pakugadzirisa Ammonia. Hove tank air pombi yakakosha uye inogona kuita zvakawanda zvakanaka kune yako aquarium.
Chiratidzo chinonyanyo taurira kuti hove dzako dzinoda okisijeni yakawanda kana ukadziona dzichifemera pamusoro - dzinowanzorembera kumashure nekubuda kwesefa. Iyi nzvimbo yetangi yako inowanzova neiyo yakanyanya kutenderera oksijeni sezvo iri padyo nenzvimbo yakakanganiswa zvakanyanya.
Yakajairika pombi yemvura yakanakira kuzadza iyo aquarium chero iwe uchiirega igare kwemazuva akati wandei usati wawedzera hove (iyo chlorine mumvura yepombi inouraya hove). Madonhwe akati wandei emhinduro mumvura yakachena yepombi anowanzo kukwana kuti dechlorinate mvura ipapo ipapo.
Uchishandisa Zvidyarwa Zvemvura Zvinogara Kugadzira Oxygen muAquarium Yako Uchishandisa zvirimwa mhenyu, unozogona kugadzira inozvichengetedza, iyo isingade dombo remhepo kana pombi yemvura. Guppies ichapedza okisijeni kubva mumvura uye ichasunungura CO2.
Kune hove dzakawanda dzinogona kurarama pasina oxygen. Iwo mabheta, goldfish, tetras, guppies, gouramis, zvichingodaro.
Hove, magakanje uye maoyster anogara kana kudyisa pazasi zvinoda yakanyungudika okisijeni yakawandisa ye3 mg/L kana kupfuura. Kuberekesa hove dzinotama nemazai adzo nemakonye zvinoda kusvika 6 mg/L panguva idzi dzehupenyu dzakaoma.
Pombi yemhepo HAIDIWI kune ichi chinangwa, chero bedzi tangi yako ichichengetedza kufamba kwemvura kwakaringana pamwe nekusuduruka kwepasi. Izvi zvinowanzoitika kana mafirita ekunze (semuenzaniso, bhokisi kana cannister) akashandiswa. Chechipiri, pombi dzemhepo dzinogona kushandiswa kumanikidza mvura kuburikidza nesefa (semuenzaniso, chipanje kana sefa yekona).
Sezvakataurwa, goldfish haidi nguva dzose pombi yemhepo kuti irarame. Inogona kuita zvakanaka mutangi yakanyatsozadzwa neokisijeni kwenguva yakareba sezvainowanzoita. Chero bedzi paine zvakakwana kufamba kwepamusoro kunoshandura kune oxygen, ipapo goldfish inogona kurarama zvakanaka pasina pombi yemhepo.
Ihove dzinodya oxygen inowanikwa pazasi mazinga e aquarium. Inobva yatanga kurova pamusoro pemvura kuti iwane okisijeni yakawanda. Zvakangodaro, hove dziri pasi pekunetsekana kwakawanda uye dzinogona kurarama kweanenge mazuva maviri mushure mekuderera kweokisijeni.
Yakanakisa Hove YeBhowa Pasina Sefa Betta hove (Shandisa hita) Guppies. White Cloud Minnows. Bofu Bako Tetras. Munyu uye Pepper Corydoras. Zebra Danios. Ember Tetra. Pea Pufferfish.
Sezvakangoita iwe neni, hove dzinoda kufema. Kuti uite izvi, hove dzinokwevera okisijeni yakanyungudika kubva mumvura - pasina iyo, marudzi mazhinji ehove achadzima. Mabubblers anowedzera okisijeni kune yako aquarium. Sezvo mabubbles achikwira, anobvongodza pamusoro, zvichibvumira huwandu hwakawanda hweokisijeni kupinda mumvura.
Hove inogona kugara pedyo nepamusoro pemvura nokuti ari kuedza kufema nyore nyore. Rangarira, hove dzinofema okisijeni yakanyungudika-kwete okisijeni yakatosanganiswa muH2O molecule. Nomuzvarirwo, aya mazinga eokisijeni akanyungudika anowanzo kuve akakwirira pedyo nepamusoro, apo kupindirana pakati pemhepo nemvura kunoitika.
Mubvunzo: Inogona Kurarama Hove Pasina Oxygen Pump
Hove Inogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Pombi Yemvura
Mubvunzo: Hove Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Oxygen Pump
Hove dzeMvura Dzakareba Sei Dzinogona Kurarama Pasina Oxygen
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Yakareba Sei Pasina Pombi
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Okisijeni
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Dzinorarama Nguva Yakadii Pasina Oxygen
Mubvunzo: Hove Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Pombi Yemvura
Hove Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Pombi
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Inogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Mhepo Pombi
Mubvunzo: Hove dzeTropical Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Oxygen
Hove yeAquarium Inogona Kurarama Nguva Yakadii Pasina Okisijeni